UNtseki uthembisa ukuthi iBafana izokwenza kancono ngeSonto | Scrolla Izindaba
UNtseki uthembisa ukuthi iBafana izokwenza kancono ngeSonto
Umqeqeshi weBafana Bafana uMolefi Ntseki uthembise ukuthi iqembu lakhe lizodlala kangcono ne-Sudan emdlalweni wokuhlungela i-Africa Cup of Nations we-Group C. Lokhu kuhlangana okubalulekile kuzo zombili izinhlangothi, kuzobanjelwa e-Al Hilal Stadium e-Omdurman e-Sudan ngehora lesithupha ntambama ngeSonto.
IBafana idinga iphuzu elilodwa ukuzibekela indawo emdlalweni ozobe use-Cameroon ngonyaka ozayo. UNtseki uthe baya lapho ukuyoqoqa wonke amaphuzu.
“Sinomdlalo obaluleke kakhulu ne-Sudan. Siya khona ukuyonqoba, hhayi ukudlala ngokulingana,” kusho uNtseki.
Emdlalweni wabo ne-Ghana ngoLwesine ebusuku, iBafana ibimosha kakhulu phambi kwamapali. Bebengawunqoba kalula lo mdlalo futhi bahole ngokugcwele u-Group C.
Bahambele e-Sudan ngoLwesihlanu ekuseni kanti kulindeleke ukuthi babe nomuzwa wenkundla ngaphambi komdlalo. UNtseki uphinde wathi unezinto ezimbalwa azodinga ukuzilungisa ngaphambi komdlalo wangeSonto.
“Sidinga ukuba yingozi phambili kwamagoli. Ngenkathi sidlala ne-Ghana besingawunqoba kalula umdlalo. Sichithe amathuba amaningi okushaya amagoli – ikakhulukazi esiwombeni sokuqala.”
Imiphumela yeBafana ngoLwesine ibabone behlala endaweni yesibili ngamaphuzu ayi-10. Kanti babelana amaphuzu alinganayo nabaholi i-Black Stars. I-Sudan isendaweni yesithathu, ngephuzu elilodwa nje ngemuva kweBafana ne-Ghana.
UNtseki uthe iNingizimu Afrika iyadlula uma idlale ngokulingana ne-Sudan. Kodwa i-Sudan idinga ukunqoba. “Okwabo ukuthi beze kithina nganoma yiliphi ithuba lokuhlungwa. Kodwa nathi kufanele sidlale umdlalo wethu futhi sibe ngcono ukwedlula ngenkathi sibhekene ne-Ghana,” kusho uNtseki.
Lo mqeqeshi uphinde wengeza ukuthi odokotela beqembu bazosebenza kuPercy Tau. Umdlali waphambili othole ukulimala emdlalweni wabo we-Ghana okumenze waya ekhefini exhuga.
Kepha indoda yase-Brighton ibuyile esiwombeni sesibili yathola lelo goli elibalulekile lokulinganisa. UNtseki uthe bazomhlola ngaphambi kokumnika ithuba lokugijima e-Sudan.